ဇေယျာကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် (၉၈)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပမည် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဇေယျာကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် (၉၈)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပမည်
သတင်း – ဇာဇာလှိုင်
ကမ္ဘာသိ မြန်မာ့သမိုင်း ပညာရှင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် မွေးနေ့ ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို. တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမ၌ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့တွင် နံနက်(၉)နာရီမှ (၁၂း၀၀)ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဗိုလ်မှူးဘရှင်၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေများ၊ တပည့်တပန်းများက စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကို မွေးနေ့ ဖြစ်မြောက်ရေး ဆော်သြသူများထဲမှ တစ်ဦးက M-Media သို့ပြောကြားပါသည်။
ခေတ်ဟောင်း မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ် အစည်းအရုံး၏ ဥာဏဗလ တာဝန်ခံ အဖြစ်လည်းကောင်း၊
ဗမာ့ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်(BDA)တွင် ပညာရေး အရာရှိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။မြန်မာ့အလင်း၊ သူရိယစသည့် သတင်းစာများ၌ ယုဒသန်ကောလိပ် သတင်းထောက် အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး သတင်းအများအပြား ရေးသားခဲ့သည်။ဥရောပ စီးပွားရေး ရာဇ၀င်၊ ခေတ်သစ်မာဃ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် သမိုင်း၊ အနော်ရထာ့ အရင်က မြန်မာနိုင်ငံ စသည့်စာအုပ်တို့မှာ ထင်ရှားသည်။
ဗိုလ်မှူးဘရှင် မွေးနေ့ ကျင်းပနိုင်ရေး နှင့်အတူ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် ဖြစ်မြောက်ရေးကိုပါ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဇေယျာကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင် အတ္ထုပတ္တိအကျဉ်း
၁။ အမည်ရင်း – ဗိုလ်မှူးဘရှင်၊ (အရဗီအမည်မှာ မုဟမ္မဒ်ဒါဝူဒ်ဖြစ်သည်)
၂။ မိဘအမည် – ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးဟိန်း + ဒေါ်စောရင်၊
၃။ မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၉၁၄၊
၄။ မွေးဖွားရာဒေသ – ပျဉ်းမနားမြို့၊
၅။ ကလောင်အမည်ခွဲများ – စံအောင်၊ သုတေသီ၊ ဗိုလ်မှူးဉာဏ၊ တိုင်း(၄)ရဲဘော်ဟောင်း၊ ဦးဘရှင်၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဘရှင်၊ မောင်ပင်တည်၊ ဝရီစံ၊ ကင်းထောက်မောင်။
ဗိုလ်မှူးဘရှင်ကို ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦးဟိန်း၊ ဒေါ်စောရင်တို့မှ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ပျဉ်မနားမြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မတိုင်ခင်တွင် ဝိဇ္ဇာတန်း၌ ကျောက်စာ၊ ပုဂံခေတ် သမိုင်း သုတေသန၊ အရှေ့တိုင်းရာဇဝင် (ရှေးဟောင်း)၊ ဥရောပ-ဗြိတိသျှ အင်ပါရာ
စသည့် ဘာသာတွဲများကို သမိုင်း (ဂုဏ်ထူး) ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ခေတ်လယ် တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနှင့် တရုတ်-မြန်မာ ကျောက်စာ သမိုင်းတို့ကို
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းရာဇ၀င်ဌာနတွင် နည်းပြအဖြစ် စတင်အမှုထမ်းသည်။
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် လက်ထောက်ကထိကရာထူး တိုးမြှင့်ခံရသည်။
၁၉၄၂-၄၃ တွင် ဂျပန်ခေတ် အာရှလူငယ်အစည်းအရုံး၊ ဥာဏဗလတာဝန်ခံ၊
၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင်ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၌ ဗိုလ်ကြီး၊ တပ်မတော် ပညာရေးအရာရှိ၊
ပဲခူးစံပြတပ်မတော်သမိုင်းနည်းပြနှင့် ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် တိုင်း(၄) မှပါဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၅-၅၆ တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၌ ဗိုလ်မှူး၊ အင်္ဂလန်တွင် စစ်သံမှူး၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၀ မှ ၇၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကော်မရှင် ဆပ်ကော်မရှင်(ခ)အလယ်ခေတ်(အေဒီ၁၃၆-၁၇၅၂) ကျမ်းပြုအရာရှိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း အမှုဆောင်ကော်မတီ (၁၉၆၅-၆၉)၊မြန်မာစာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများတွင် အထူးကထိက တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်(၁၉၅၆-၁၉၇၀)အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သမိုင်း ကော်မရှင်၌ ကျမ်းပြု အရာရှိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် သမိုင်းတံခွန် ဂျာနယ်တွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာတို့ဖြင့် သုတေသန စာတမ်းများကို ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ လောကထိပ်ပန် စာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပုဂံ ရှေးဟောင်းခေတ် မင်စာများ အကြောင်း ဖော်ပြသော ပုဂံမင်စာစု သုတေသနခရီး အစီရင်ခံစာ စာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း၌ လူမျိုးစု ဆိုင်ရာ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ ထုတ်ဝေသော ပညာပဒေသာ စာစောင်၊ ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် မြန်မာစာ အသင်း၊ သတ္တဗေဒ အသင်း၊ မွတ်စလင် ကျောင်းသားများ အသင်း စသည်တို့မှ ထုတ်ဝေသော မဂ္ဂဇင်းများ၊ ငွေတာရီ၊ ပညာတန်ဆောင်၊ လုပ်သားပြည်သူ နေ့စဉ် (အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ) သတင်းစာများတွင်လည်း သုတေသန ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွင် ဦးဘရှင်ဟူသော အမည်ဖြင့် တိုင်းသားများအကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ ကချင်လူမျိုး(တွဲ၁၊ စာ၁၅)၊ ကယားလူမျိုး (တွဲ၁၊ စာ၇၃)၊ ကရင်လူမျိုး (တွဲ၁၊ စာ၁၅၂)၊ ကောလူမျိုး(တွဲ၁၊ စာ၂၆၆)၊ ခမာလူမျိုး(တွဲ၂၊ စာ၂၄၈)၊ ခါစီလူမျိုး(တွဲ၂၊ စာ၂၈၇)၊ ခန္တီးရှမ်း(တွဲ၂၊ စာ၃၂၃)၊ ချင်းလူမျိုး(တွဲ၂၊ စာ၃၈၉)၊ နီဂတိုလူမျိုး(တွဲ၆၊ စာ၁)၊ ပကု(တွဲ၆၊ စာ၁၉၉)၊ ပဒေါင်လူမျိုး(တွဲ၆၊ စာ၂၂၆)၊ ပလောင်နှင့်ပလေး(တွဲ၆၊ စာ၂၆၁)၊ ပိုးကရင်(တွဲ၆၊ စာ၃၈၉)၊ ပျူလူမျိုး(တွဲ၇၊ စာ၉၀-၉၄)၊ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဘာသာများ (တွဲ၁၀၊စာ၁၃၁)၊ မြန်မာလူမျိုး(တွဲ၁၀၊ စာ၃၃၇-၃၅၃)၊ ရှမ်းလူမျိုး (တွဲ၁၁၊ စာ၃၆၉-၄၀၈) တို့ကို ပြုစုရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၇၀ ပြည့်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ မကွယ်လွန်မီက “အနော်ရထာအရင်က မြန်မာနိုင်ငံ” စာအုပ်ကို နောက်ဆုံး ရေးသားခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း ကော်မရှင်၌ အစောပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကျမ်း ပြုစု ရေးသားနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်မှူးဘရှင်သည် သင့်ဘဝ၊ ငွေတာရီ၊ မြဝတီ၊ စစ်ပညာဂျာနယ်၊ ပညာပဒေသာ၊ ပညာလောက၊ ပညာတန်ဆောင် ယဉ်ကျေးမှု စာစောင်၊ ခေတ်ကြေးမြင် နှစ်လည် မဂ္ဂဇင်း၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သတ္တဗေဒ နှစ်ပတ်လည် စာစောင်နှင့် အခြားသော မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဆောင်းပါးများ ရေးသား ခဲ့ပါသည်။
OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာပြည် လာရန် စီစဉ်နေ (Nov 22, 2012)
ဒယ်အိုးဆရာတော် တရားပွဲများ မလေးရှား မြို့ကြီးများမှာ စည်းကားစွာကျင်းပ (Nov 22, 2012)
ဝါဒမှိုင်းတိုက်မှုတွေ… လာရာ… လားရာ (Nov 21, 2012)
အတိတ်ကာလက မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦး (Nov 21, 2012)
ဦးရာရှစ်၏ တိုင်းပြည်အတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များ (ရေးသူ ဒေါက်တာမောင်မောင်) (Nov 5, 2012)
ဦးတင်ထွန်း (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ ၁၉၅၄-၅၅) (Sep 27, 2012)
ဘိုးတော်မင်းတရား လက်ထက် ရမ္မာဝတီ မြို့ဝန် စာဆိုတော် ဆရာကြီး ဦးနု (Sep 22, 2012)
ပသီစာဆို ( ရွှေတောင်သာဂသူဘွဲ့ခံ ဆရာကြီးဦးနု) (Apr 4, 2012)
ကျားဘညိမ်း သို့ စာကြွေး (လူထုဒေါ်အမာ) (Aug 15, 2011)
ကျားဘငြိမ်း (၁၉၂၃-၁၉၇၉) (Aug 15, 2011)
This entry was posted on December 12, 2012, in အတ္ထုပ္ပတ္တိ, အထူးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Singapore turns away rescued boat people
The Al-Jazeera documentary that Burma’s government publicly condemned →